सुदर्शन खतिवडा/काठमाडौं, ३ वैशाख । मंगलबार नेकपाका मन्त्री र सांसदले बुद्ध एयरसँग गरेको व्यवहारका घटना चर्चित भए । यी दुई घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमा चर्चा चुलिरहँदा सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले पत्रकारलाई सम्प्रेषित गरेको खबरबारे बुद्ध एयरले स्पष्टीकरण समेत दिइसकेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा सोमबार भैरहवाबाट काठमाडौं आउनुपर्ने थियो । उनले भैरहवा–काठमाडौंको लागि बुद्ध एयरको साँझ ६ बजेको टिकट लिएका थिए ।
पाँच जिल्लाका विभिन्न कार्यक्रम भ्याएर नियमित जहाजको उडानबारे फलोअप लिँदै आएका उनी पहिलोपटक समयमै विमानस्थल पुगे । सुरुमा विमान नउड्ने जानकारीपछि उनी होटलमै फर्किए । तर, पुनः विमान उड्ने खबरपछि उनी विमानस्थलमा पुगे । त्यतिबेलासम्म विमान उडिसकेको थियो । यो जानकारी हो पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले दिएको ।
पार्टी निकट पत्रकार सम्मेलनमा उनले बुद्ध एयरविरुद्ध आगो ओकले । उनले भने, ‘यो बुद्ध एयर भन्नेले गर्नु गर्‍यो, उडाउँछु भनेर यात्रुलाई अलपत्र पार्ने पूर्व जानकारी नै नदिई उड्नेबेलामा जहाज उड्दैन भन्यो, लुम्बिनी जस्तो पर्यटकीय स्थलमा यस्तो अवस्था छ।’
उनले अगाडि थपे, ‘तपाईंहरू सधै सरकारको पछि लाग्नुहुन्छ, यस्ता विषयलाई पनि उठाउने गर्नुहोस् । तपाईहरु पनि विज्ञापनमा मात्रै नअल्मिनु होला, विज्ञापन पनि त्यसले तपाईंहरुलाई के दिन्छ………खैर छोडिदिउँ ती कुरा, एयरलाईन्सको कारणले जहाज छुट्यो, जहाज छुटेका कारण आज भेट भयो ।’
बुधबार साँझ काठमाडौंबाट बुद्ध एयरको जहाज झापाको भद्रपुरको लागि उड्यो । जहाजले उचाई लिएपछि एयर होस्टेजले एकजना भद्र देखिने व्यक्तिलाई बोर्डिङ पासमा भएको सिट नम्बर अनुसार बस्न आग्रह गरिन् । ती भद्र एक्कासी कड्किए । उनले नम्र स्वरमा बोलेकी एयर होस्टेजलाई हप्काउँदै भने, ‘मलाई तिमीले सिकाउने ? म हो हो चिनेकी छस् ? बुद्ध एयरको दादागिरी अति भयो, हामीले बुद्ध एयरको गतिविधि नजिकबाट हेरिरहेका छौं ।’
ती व्यक्ति अरु कोही नभएर नेकपा सांसद एवम् म्यानपावर व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष एलपी साँवा लिम्बु हुन् । उनको थर्काईपछि हेयर होस्ट्रेस डराएको र राम्रोसँग काम गर्न नसकेको सँगै यात्रा गरेका एक यात्रुले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
उनले विमान रोकिनासाथ नओर्लन आग्रह गर्दा पनि हकारेको र उनको व्यवहारबाट अन्य यात्रुहरु पनि स्तब्ध रहेको सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरुमा उल्लेख छ ।
घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमा पत्रकार तथा लेखक कुसुम भट्टराई लेख्छन्, ‘यो गणतन्त्र हो, टाइगर प्यालेसबासीका लागि जहाजले आधा घन्टा कुर्न सक्दैन । जहाजलाई आधा घन्टा कुर्न लगाउनु भनेको नै ६८ जना यात्रुको अपमान हो । मन्त्री भनेको जनताले तिरेको करबाट तलब खाने जनताको सेवक हो, मालिक हैन । कसैले माकाफुईं नदेखाए हुन्छ ।’
भट्टराई अगाडि लेख्छन्, ‘बुद्ध एयर सञ्चारमन्त्री बासकोटाको निजी जहाज हैन । अन्य थुप्रै यात्रु त्यसमा हुन्छन् । जहाज कतिबेला उडने या नउड्ने भन्ने कुरा मन्त्रीको तजविजको कुरा पनि हैन । यो विलकुल प्राविधिक कुरा हो । क्याप्टेनका दृष्टिमा राजा हुन् कि मन्त्री, सबै यात्रु हुन् । क्याप्टेनले कुनै एक यात्रुका खातिर अन्य सारा यात्रुको जीवन जोखिममा पार्न सक्दैन । बुद्ध एयरका अनुसार मौसमलाई ध्यानमा राखेर जहाज उडाइएको हो ।’
भट्टराईले अगाडि लेखेका छन्, ‘मन्त्रीलाई कुर्दा मौसमी प्रतिकूलताका कारण अन्य सारा यात्रुको उडान रद्द हुनसक्थ्यो । जहाज दुर्घटनाको पनि खतरा हुनसक्थ्यो । यी टेक्निकल कुरा हुन् । जहाज उडानको प्राविधिक पक्ष नबुझी मन्त्रीले गनगन गर्नुका कुनै तुक छैन । मेरो विचारमा बुद्धका क्याप्टेनले जे गर्नुभो, विलकुल एउटा विमान चालकले गर्ने कर्तब्य निर्वाह गर्नुभयो । उहाँलाई धन्यवाद छ ।’
सुवास अधिकारी ट्विटरमा लेख्छन्-
सडक तिनको, पेटि तिनको, खोला तिनको। आकाश सम्म चाहिँ ओगट्न भ्याएनछन। धन्यबाद बुद्ध एयर नवराजाहरुलाई भन्दा सामान्य नागरिकलाई प्राथमिकता दिएकोमा। https://t.co/B2bvz3XPyn
— Subash Adhikari (@subashkid) April 16, 2019
घटनापछि बुद्ध एयरले सार्वजनिकरुपमा वक्तव्य निकालेर घटनाबारे प्रष्ट पारेको छ । यस्तो छ बुद्ध एयरको विज्ञप्ति-
केही महिनाअघि रवीन्द्र अधिकारी सवार हेलिकप्टर दुर्घटनामा पनि पाइलटले प्रेसरमा उडान गर्नुपर्ने अवस्थाबारे छलफल सतहमा आएको थियो । विमान कम्पनीका पनि समस्याहरु छन् । तर, ती समस्याका स्रोतहरु छन् । समयको मूल पत्ता नलगाई समाधान निकाल्न सकिँदैन ।
एकातिर विमानस्थलको अवस्था ठिक छैन । उडान जतिसुकै बेला पनि रद्द हुन सक्छ । अर्कोतिर विमानस्थलमा भिआईपी आतंक छ । राष्ट्रपतिको लागि विमानस्थल नै ठप्प बनाउनेदेखि अन्य भिआईपीका लागि विमानहरुले भनेको बेला उड्न नपाउने अवस्था गणतन्त्र नेपालका लागि शोभनीय कुरा होइन ।
सबै जानकारी र घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा प्रश्न उठ्छ- सांसदलाई आफ्नो सिटमा बस्न अनुरोध गर्न पाउने कि नपाउने ? मन्त्रीका कारण ६८ जना यात्रुको व्यवभार बढाउनेदेखि जीवन नै जोखिममा पार्ने कि नपार्ने ? आखिर बुद्ध एयरले के गर्नुपर्थ्यो ?
फिचर पोस्ट, विशेष